नवरात्रको पाँचौं दिन "स्कन्दमाता"को विशेषता - Aamsanchar
-ज्यो. प. नारायणप्रसाद दुलाल ,कार्तिक ५, २०७७
नवरात्रको पाँचौं दिन स्कन्दमाता स्वरूप नवदुर्गा भवानीको आराधना गरिन्छ । देवी दुर्गा, आफ्नो पाँचौं स्वरूपमा स्कन्दमाता नामले प्रसिद्ध हुनुहुन्छ । शिव तथा पार्वतीका पुत्र कुमार या कार्तिकेयको अर्को नाम स्कन्द हो । पौराणिक कथा अनुसार देवासुर संग्राममा देवताहरूको सेनापति स्कन्द हुनुहुन्थ्यो र स्कन्दले नै दैत्य-पति तारकासुरको वध गर्नुभएको थियो । स्कन्दमाता शब्द दुईवटा शब्दबाट मिलेर बनेकोछ, पहिलो स्कन्द तथा दोस्रो माता अतस् स्कन्द या कार्तिकेयको माता देवी स्कन्दमाता हुनुहुन्छ ।